Yese Inovuza yeFortnite Skins uye zvimwe zvizorwa zvinowanikwa mukuvandudza v18.40 | la-manette.com
Ese Mavuza eFortnite Skins uye zvimwe zvizorwa zvinowanikwa mukuvandudza v18.40
23 novembre 2021 ndima JEAN-MICHEL CAPPIN
Heano ese maSkins anobuda Fortnite uye zvimwe zvekuzora zvakawanikwa muv18.40 update yakatanga kurarama kare nhasi.
In makuru updates for Fortnite Battle Royale, kune mafaera matsva anowedzerwa kumutambo anogona kunge ari muchimiro chezvombo zvitsva / zvinhu, matehwe ari kuuya uye zvizorwa, shanduko yemepu, nyowani shoma nguva modes (LTM) nezvimwe. Epic Games nguva pfupi yadarika yakabatana nemafranchise akawanda akasiyana uye akange asimbisawo kuti kubatana ne Naruto akanga achiuya.
Fortnite Yakadeuka Maganda v18.40
Nekubatana uku, Epic yakatumirawo vhidhiyo inoratidza iyo Naruto matehwe. uyo anonzi Naruto nevamwe vese veChikwata 7 vanosvika paFortnite Island. Kune mamwe mashoma Maganda akawedzerwa kumafaira, uye iwe unogona kuona zvese izvo mumifananidzo iri pazasi:
Fortnite v18.40 Maganda Akabuda
Sezvinoita nekudyidzana kwakawanda, kune akasiyana masumbu aunogona kutenga kubva kuFortnite Item Shop yeNaruto Cosmetics uye kune matatu masumbu aunogona kusarudza kubva. Ese emapaketi ane zvinhu zvishanu uye iwe unogona kuona mazita uye zvekuzora zvinosanganisirwa mune imwe neimwe pazasi:
Naruto & Kakashi Bundle - 2 V-Bucks
Naruto Uzumaki Skin (Epic)
Scroll Back Bling (Epic)
Kakashi Hatake Skin (Epic)
Pakkun Back Bling (Epic)
Pizza Eating Jutsu Loading Screen (Isingajairike)
Sasuke uye Sakura Bundle - 2 V-Bucks
Sasuke Uchiha Skin (Epic)
Shuriken Demoni Wind Back Bling (Epic)
Nyoka Munondo Pickaxe (Epic)
Sakura Haruno Skin (Epic)
Yakavigwa Leaf Cloak Back Bling (Epic)
Team 7 Loading Screen (Isina kujairika)
Kusheedza Jutsu Emote (zvisina kujairika)
Kana iwe uchida kutenga zvinhu zvakananga, unogona kuzviita, asi masumbu ane mitengo yakaderedzwa.
Verenga zvakare: Ndingawane kupi Xbox X series? Vese vatengesi vane mvumo yekutenga iyo console
Fortnite Zvizoro v18.40.
Heano mamwe ese ekuzora akawedzerwawo muFortnite update v18.40:
Fortnite v18.40 mapakeji akaburitswa
Sezvinotarisirwa, mazhinji ezvizoro akawedzerwa mune iyi update ndeyekubatana kweNaruto, zvisinei pane imwe Fortnite bundle yakawedzerwa, yaunogona kuona pazasi:
Mupepeti-in-mukuru chez la-manette.com
Jean Michel anga ari mupepeti-mukuru pa la-manette.com kwemakore akati wandei ikozvino. Akatanga kunyora paCall of Duty muna 2018 kuti asiyane mumitambo yenguva yakazotevera kunyanya Fortnite, kuti azopedzisira adzoreredza nhanho dzake nekudzoka kwakasimba kweCoD kumusoro kwemitambo ine mukurumbira wayo. battle royale inopera ne "zone" uye inotanga na "War". Unogona kubata Jean Michel pakero iyi: [email inodzivirirwa]
Zvinyorwa zvitsva naJEAN MICHEL CAPPIN (ona zvese)
Unoda shamwari dzeMhuka Kuyambuka: New Horizons Multiplayer? Govera shamwari yako makodhi uye makodhi eDodo pano! - Ndira 11, 2022
Iyo 10 yakanakisa adventure mitambo - Ndira 10, 2022
Ekutanga gumi nemashanu ekurodha pasi paSwitch eShop yemwedzi waZvita 15. - Ndira 8, 2022
Fortnite Vhiki 4 Snow Matambudziko - Yakavanzika Banner Nzvimbo Yakawanikwa
Maitiro ekumisikidza A2F paChinja: Seta maviri-factor verification yeNintendo Account?